MUQDISHO, Soomaaliya - Waxaa maanta soo gaarey magaaladda Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, Wafdi balaaran oo ka socda dowladda India, kaasi oo kulan la qaatay Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre.
Wafdigaan ayaa waxaa hogaamineysay Safiirka India ee Soomaaliya, oo lagu magacaabo Suchitra Durai, taasoo ay la socdeen diblumaasiyiin kale oo wadankeeda kala yimid.
Labada dhinac ayaa waxay kawada hadleen arrimo ku saabsan xoojinta xiriiirka ka dhaxeeya Soomaaliya, sida lagu shaaciyay qoraal lasoo dhigay barta Twitter-ka Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya.
Danjire Suchitra Durai ayaa sheegtay in dowladeeda ay ka go'an tahay sidii ay usii wadi lahayd dowladeeda taageeradda ay siiso xukuumadda Muqdisho, taasoo isugu jirta dhinacyadda amniga iyo dhaqaalaha.
Wararka ku xeeran kulanka ayaa waxay intaas ku darayaan inay isla soo qaadeen mas'uuliyiinta kulmay arrimo ku saabsan Maxaabiis Soomaaliyeed oo ku xiran dalka Hindiya, iyo sidii loosii dayn lahaa.
Maxaabiista ku xiran dalka Hindiya ayaa u xiran fal-dambiyeedka kala duwan, kuwaasoo u badan Burcad badeednimo, iyadoo ay jireen Maxaabiis badan oo horey looga soo sii daayay Xabsiyadda India.
India kuma lahan magaaladda Muqdisho wax safaarad ah ama Qunsuliyad, laakiin inta badan dalalka aan Safaaradaha ku lahayn dalka waxaa howsha iyo xiriirka diblomaasiyadeed usii wada Safiiradooda u fadhiya Kenya.
Ciidamadii Xasilinta oo la kala diray iyo Khilaaf ka taagan qorshaha amniga
Soomaliya 24.07.2018. 11:23
Farmaajo ayaa sababo amni ugu guurey Xerada Jeneraal Gordan kadib markii Al-Shabaab ay...
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya oo kusoo laabtay Muqdisho
War Saxaafaded 28.01.2018. 20:34
Soomaliya 07.06.2018. 11:33
Diyaarad sida Maxaabiis kale oo ka dagtay Muqdisho [Daawo]
Soomaliya 07.03.2018. 11:16